Umatshini weDiode Laser
Uluhlu lokuNciphisa uMzimba
Umatshini weCryolipolysis Coolplas
Sincosculpt EM umatshini
Umatshini we-PDT we-LED
I-laser egciniweyo kakhulu yokuphinda iphinde iphinde ibuyele e-Topsincoheren.
Iseshoni enye kuphela! Inzululwazi yolusu: IiLasers zibonelela ngokufudumeza okulawulekayo kwi-HSP okanye iprotein yokothuka ubushushu. Le yeyona nzuzo iphambili kwi-microneedling. Ngokwahlukileyo koko ndisebenzisa i-microneedling xa NDIFUNI ubushushu kwi-epidermis / dermis-cinga ukuhanjiswa kweziyobisi nzulu. Ubushushu buphumela ekulungisweni okusebenzayo kwe-collagen. Ukhetho lwelaser: CO2. Ngamaqhezu. Kusetyenziswe iisetingi ezi-3 ezahlukeneyo. Ngokulandelelana kwe...
I-Microneedling lolona nyango lubalaseleyo lokunciphisa i-acne, i-acne scars kunye ne-hyperpigmentation. Inkqubo ikhuthaza ukukhula kwe-collagen entsha kulusu lwakho, ikhuthaza ulusu lwakho ukuba luziphilise ngokwalo, lunciphisa imbonakalo ye-ice pick, ibhokisi yebhokisi, kunye ne-acne scars. Xa uBusika belona xesha lifanelekileyo lokuqalisa iMicroneedling Topsincoheren bakupha i-20% yesaphulelo kuNyango loBuso oluPhambili kule Novem...
UKUSUSWA KWEZINWELE ZELASER!
Iqonga le-808 le-laser Removal ye-laser laphuhliswa ngokusekelwe kwinkqubela phambili yamva nje kumayeza obuhle kunye nobuchwepheshe be-LASER. Yilaser ye-810nm ye-diode yangoku idibanisa kwisixhobo esinye kunye nesantya esivumela ukuba senze unyango olusebenzayo kakhulu ngexesha elincinci. Inkqubo yayo ye-Revolutionary ye-3 kwi-teknoloji ye-1 ithetha ukuba zonke iintlobo zezigulane zinokunyangwa ngaphandle komda ...
Ngeli xesha, ndiya kuchaza indlela yokususa iinwele.
Iindlela zokususa iinwele zahlulahlulwe ngokoqikelelwa ・ Photoepilation ・ Ukususwa kweenwele ngelaser yonyango ・ Ukususwa kweenwele zenaliti Inokwahlulwa ibe ziindidi ezintathu. Indlela yokususwa kweenwele kwi-photoepilation kunye nokususwa kweenwele ze-laser yonyango iyafana. Ngokukhanya okukhanyayo okuhambelana ne-pigment ebizwa ngokuba yi-melanin kwingcambu yeenwele, yonakalisa izicubu ezikhulayo zeenwele kwaye isuse iinwele. Nokuba mec...
Yintoni i-IPL laser?
I-laser ye-IPL yeyona nto inamandla yokukhanya kwepulsed (IPL) ukunyanga i-pigmented, izilonda zemithambo kunye nolusu lwamaqhakuva. Kwiiseshoni ze-1-3 nje i-IPL laser iphucula ukubonakala kwamabala eminyaka ubudala, umonakalo welanga, izilonda ze-vascular, i-rosacea kunye ne-freckles. Oku kunceda ekuphuculeni ibala kunye nokuchasa ukuguga kwesikhumba. I-IPL laser iqhayisa ngezona ziphumo ze-IPL ezikhawulezayo * Ukucoca kwiiseshoni ze-1-3, xa kuthelekiswa neeseshoni ze-4-5 kunye ne-compe...
Yintoni iAne Clearance?
Olu nyango lwe-laser lwe-IPL oluphambili lujolise kwiibhaktheriya eluswini ezibangela i-acne. I-photo-dynamic reaction iyenzeka, ezonakalisa ngokukhetha iibhaktheriya ngokwazo. Ngonyango olulandelelanayo, izinga lokutshatyalaliswa kwamaqhakuva linokuba likhulu kunokukhula kwebhaktheriya, nto leyo ekhokelela ekuncitshisweni kwezilonda ezivuthayo kunye nokuthintelwa kokonakala. Ukuba ingcinga yokutyibilika kwi...
Topsincoheren Team Learning iSeshini yokwabelana
Isebe lezoRhwebo laseBeijing Sincoheren liqhube utshintshiselwano lokufunda nonxibelelwano lweentsuku ezine. Wonke umntu uthatha inxaxheba ngokukhutheleyo, afunde kunye kwaye aqhubele phambili kunye. Ukufunda + ukwabelana + nokufika. Ukuba unamathela kuyo, uya kufumana umahluko omkhulu. Onke amaqabane eFirewolf aya kusebenza nzima kwaye azinikele ekuqeqesheni, ekufundeni nasekusebenzeni, ukuze athathele ingqalelo ngokwenene ...
Umatshini weenkwenkwezi we-Topsincoheren - 755 umatshini we-laser we-Sinco-Alex Yag
Uyilo lwethu olutsha lweklinikhi yakho! Yandisa umsebenzi wakho ngomatshini wethu we-laser weSinco-Alex Yag ophucukileyo one755nm&1064nm Wavelength. inika ishishini lakho ukuguquguquka kunyango nge-755nm yethu kunye ne-1064nm itekhnoloji yewavelength ihamba ngaphaya kokususwa kweenwele ukukuvumela ukuba uphathe imibimbi, izilonda ezinombala obomvu kunye nezilonda zemithambo. Oko kubhetyebhetye kunokukhokelela kwingeniso entsha kwaye kunyuse iROI yakho....
Idayimane yedermabrasion ibonelela ngeziphumo ezifanayo njenge crystal dermabrasion yemveli ngelixa ikwafaneleka kwiintlobo zolusu ezibuthathaka. Yinkqubo yokusulungekisa ulusu olungaphangeliyo esebenzisa iintloko zedayimani ezingeyontsholongwane ukukrazula ngobunono umaleko ophezulu wolusu, emva koko ususe amasuntswana kunye nalo naluphi na ukungcola kunye nolusu olufileyo. I-Microdermabrasion idla ngokusetyenziselwa: *Ukucoca nzulu/ukukhukula. *Ayifezekanga...
ukuma shape X Isixhobo Ivunywe yi-FDA ngokusebenza kwayo kunye nokhuseleko kuNyango lwe: Localized Fat Cellulitis Body Remodeling 4 in 1 TECHNOLOGIES Infrared Radiofrequency Roller Massage Vacumtherapy Areas esinokuthi sinyange I-Abdomen Flanks Amathanga Glute us Ukukhwela ibhulukhwe Izibonelelo 1. Non-inv ...
Imveliso entsha yeSincoherent entsha - 5D Hifu
I-Hifu iyona kuphela i-FDA-ecinyiweyo, inkqubo engekho-invasive ephakamisa kwaye iqinise intamo, isilevu kunye ne-brow, kwaye iphucule imigca kunye nemibimbi esifubeni. U-Hifu usebenzisa amandla e-ultrasound avavanywe ixesha ukuphakamisa nokuqinisa ulusu ngokwemvelo - ngaphandle kotyando okanye ixesha lokuphumla. Indlela Esebenza ngayo: Esi sisixhobo sasekhaya sokukhupha i-micro exfoliation! Uyazi apho ndiyithanda khona - imigca emincinci ngaphezulu komlomo wam. Inyakamisa, ihlaziya ...
Ngaba i-Coolplas iyasebenza ngokwenene kwi-chin ephindwe kabini? Ewe iyenza! Chaza umhlathi wakho ngeCoolplas!
Ukuzilolonga esilevini kabini akusebenzi, kodwa Ulusu olunokwenzeka lunonyango olungelulo utyando olusebenzayo. Coolplas! I-Coolplas yonyango lonyango olukhulula amanqatha phantsi kwe-chin kwaye phantse naphi na. Okusebenzayo Non-utyando Akukho naliti Ukonakalisa iiseli ezinamafutha Ixesha elincinane lokuphumla I-FDA-Ivunyiwe Isebenza njani i-Coolplas? Isebenzisa ukupholisa okulawulwayo ukuphelisa la mafutha anenkani ekunzima ukuwatshintsha, nokuba ...
12345 Okulandelayo > >> Iphepha 1/5
UTHETHWANO SIMAHLA +86 137 1859 3357
Idilesi Umgangatho wesine, iBloko A, iSakhiwo saseJinyun, esinguNombolo 43, kwisitalato saseMntla, eXizhimen, eBeijing